Mety Hoe Ara-dalàna izany Ankehitriny, Saingy Tsy Vitan’ireo Shinoa Intsony Ny Mbola Hiteraka Zaza Faharoa Na izany Aza · Global Voices teny Malagasy
Mety Hoe Ara-dalàna izany Ankehitriny, Saingy Tsy Vitan'ireo Shinoa Intsony Ny Mbola Hiteraka Zaza Faharoa Na izany Aza
Voadika ny 07 Novambra 2015 4:02 GMT
Vakio amin'ny teny 日本語, Ελληνικά, Español, Français, Català, Deutsch, polski, Italiano, English
Saribe milaza ny politikan'ny zaza tokana, tany amin'ny taona 1980
Tsy araka izay mety ho nandrasanao fa maro ireo Shinoa no tsy faly loatra amin'ilay fanambaràn'ny Antoko Kaominista tamin'ny 29 Oktobra, hoe nofoanana ilay politka mametra ny isan-jaza ho tokana, ary omena alàlana ireo rehetra manambady mba ho afaka miteraka fanindroany raha tiany. Fa maro kosa ireo namaly ilay “vaovao tsara” tamin'ny fandrarahana ny hasosorany teny anaty media sosialy Shinoa momba ny vesatra aterak'ilay lazaina ho “politika vaovaon'ny isan-jaza ho roa”.
Manodidina ny 3.000 yuan fotsiny ny salan-karama isambolana ho an'ny olona iray manana diplaoma any amin'ireo tanàndehibe toa an'i Beijing (eo amin'ny US $500 eo) raha ny salambidin'ny trano fonenana kosa 30.000 yuan (US $5.000) isaky ny metatra toradroa. Ary mbola hitarika koa fandaniana lafo amin'ny vovo-dronono vahiny ny fitaizàna zaza iray, sy fandaniana amin'ny fametrahana azy amin'ny toby fitaizàna ary ny fitomboan'ny mety hahavery asa ireo reny tanora — izany rehetra izany no olana tena misy.
Vao mainka hanamora ny politikan'ny fandrindràna ny isan'ny fianakaviana ao Shina ireo fepetra vaovao, ilay firenena be mponina indrindra eto ambonin'ny tany, izay nampiditra ny politikan'ny zaza tokana tany amin'ny faramparan'ny taona 1970 tany ho any mba hifehezana ny fidangan'ny isan'ny mponina tamin'ny alàlan'ny fanerena ny maro tamin'ireo mpivady tany an-drenivohitra tsy hiteraka afa-tsy zaza tokana ary ireo tany ambanivohitra ho roa ihany raha toa ka vavy ny zanany voalohany.
Natao hampifandanja ny isan'ny lahy tsy vavy ilay fanovàna ny politika fandrindràna fianakaviana, ary hiatrehana ny fihanteran'ny mponina, araka ny fanambaràna iray navoaka taorian'ny fivoriana lehibe nataon'ny antoko tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo.
Ankizy vitsy amin'ny sandany lafo
Araka ny lazain'ny Birao Nasionaly momba ny Antontanisa, nisy 1.368 lavitrisa no isan'ny mponina tao Shina ny faran'ny taona 2014, raha tao India, amin'ny maha-firenena faharoa erantany be mponina azy, nisy vahoaka1.25 lavitrisa teo ho eo.
Hatramin'ny nampiharana azy, novinavinaina ho niteraka fihenàna 400 tapitrisa tamin'ny isan'ny olona tao Shina ilay politikan'ny zaza tokana, hoy ny governemanta. Kanefa, nokianina ihany koa izy io ho fototr'ireo olana sosialy marobe, indrindra fa ny tsy fitovian'ny isan'ny lahy sy vavy, ny fihanteran'ny mponina ary ankohonana maro namoy ilay zaza tokana monja.
Araka ny angondrakitra ofisialy tamin'ny 2014, ny fifandanjan'ny isan'ny lahy amin'ny vavy teraka tamin'ny 1980 ary tsy manambady dia 136 :100, faran'izay tsy mifandanja indrindra eto amin'izao tontolo izao.
Tamin'ny 2014, nànana vahoaka maherin'ny 212 tapitrisa mihoatra ny 60 taona i Shina, manome ny 15.5 isanjaton'ny mponina.
Tafakatra ho 1 tapitrisa ireo fianakaviana namoy ny zanaka tokany noho ny loza voajanahary, loza samihafa, aretina sns… tao Shina hatramin'ny 1990, araka ny Akademia Shinoa momba ny Siansa Sosialy.
Na dia mitontongana aza, mbola voatazona ho amin'ny haavo 916 tapitrisa tamin'ny 2014 ny isan'ny hery mpamokatra tao Shina, mihoatra lavitra amin'ny isan'ny mponina 730 tapitrisa ao Eoropa — lavitry ny fisian'ny tsy fahampian'ny hery miasa na fanjavonana noho ny fiparitadritahan'ny mponina.
Tany am-piandohan'ny 2014, nohalefahan'i Shina ny politikany momba ny fandrindràna fianakaviana mba hamelàna ireo ray sy reny ho afaka hiteraka zaza faharoa raha toa efa zaza tokana ihany koa ny iray amin'izy mivady. Araka ny Kaomisiona Nationaly momba ny Fahasalamàna sy ny Fandrindràna Fianakaviana, hatramin'ny faran'ny May, 1.45 tapitrisa monja tamin'ireo mpivady 11 tapitrisa afaka manao izany no nangataka hiteraka zaza faharoa.
‘Hiteraka andevo iray hafa ho mpandoa trosa indray’
Araka ny fitsapankevitra iray tety anaty aterineto, nataon'ny tranonkalam-baovao Shinoa Sina.com, 60 isanjaton'ireo namaly no niteny fa tsy maniry hiteraka fanindroany izy ireo taorian'ilay fanambaràna ilay politika vaovao. Maherin'ny 72 isanjato no niteny ny olana ara-toekarena ho sakana fototra amin'ny tsy hiterahany fanindroany.
Ny tahotra sasany miely any koa dia ny hoe hidika tsindry ho an'ireo vehivavy mba hanokana fotoana betsaka kokoa ao an-tokantrano fa tsy amin'ny asa ny fiterahana zaza iray hafa, angamba hampihena ny faharisihan'ireo mpampiasa tsy handray vehivavy hiasa ao aminy.
Vinaina hahatratra ny 1.45 lavitrisa ny vahoaka ao Shina amin'ny 2030 taorian'ny fifaranan'ilay politikan'ny zaza tokana, hoy i Wang Pei'an, lefitry ny lehiben'ny Kaomisiona Nationaly momba ny Fahasalamàna sy ny Fandrindràna Fianakaviana. Mpivady manodidina ny 90 tapitrisa no voafaritra ho afaka hiteraka fanindroany taorian'ny nampiharana ilay politika, hoy i Wang, nampiany hoe manodidina ny 60 isanjato amin'ireo vehivavy fantatra ho afaka manao izany no eo amin'ny 35 taona na mihoatra kely.
Ao anatin'ny faritra natao hanehoana hevitra ao amin'ny Headline News ao amin'ny Weibo, ireto fanehoankevitra manaraka momba ilay politika vaovaon'ny zaza-roa ireto no nahazo ‘tiana’ be indrindra :
Tsy ny politika fandrindràna fianakaviana no antony hanakànana ny olona tsy hiteraka. Ireo manankarena afaka mitsoaka mankany ivelany any Hong Kong mba hiteraka. Ny teboka fototry ny fisalasalàna dia ny tsy ho fahafahana manohana zaza maromaro kokoa.
Raha miteraka iray hafa aho, iza no mety hitaiza ilay zaza iray? Afaka hiantehitra amin'ny governemanta ve aho? Rehefa atao ny kajy, izaho ihany no tsy maintsy hanabe ny zanako. Saingy azafady, tsy ho sahy hiteraka fanindroany aho satria tsy ho afaka hiantoka ny fanohanana iray hafa. Henjana ny manabe zaza iray, ary mety hanaraka hatramin'ny aiko raha mbola hitaiza iray hafa. Raha tonga dia hitsiako, tian'ny governemanta hiteraka andevo hafa iray mpandoa trosa indray isika, sa tsy izany?
Tsara ho anao ny miala an'i Shina. Lafo ny fianana eto ka na ny ho faty aza tsy vitanao akory. Miaina toy ny biby fiompy isika.
Tsy vitan'ireo mponina an-tanàndehibe ny hiahy zaza faharoa noho ny vesatry ny fiainana, raha ireo tantsaha any amin'ny faritra mahantra kosa indray miezaka ny hanana zanaka maro mba hahamaro isa ny tànana miasa. Avy eo ireo tantsaha mandeha mifindra monina any an-tanàndehibe, mitondra ho amin'ny fiakaran'ny vidin-trano.
Nahoana ny olona no mbola avela hizaka zaza iray indray raha iray aza efa mila tsy ho vitany? Lasa be fanahiana ve ianareo [mpitondra] hoe tsy ampy ny isan'ireo andevo hanompo anareo?
Mediam-bahoaka 2 andro izay